Angel Di Maria oo si diblomaasiyad leh uga jawaabay wararka Neymar la xiriirinaya PSG – Gool FM
Angel Di Maria oo si diblomaasiyad leh uga jawaabay wararka Neymar la xiriirinaya PSG
(Paris) 22 Luulyo 2017. Angel Di Maria aya door Diblomaasiyadeed ciyaaray mar wax laga waydiyay wararka Neymar la xiriirinaya kooxda PSG, laakiin wuxuu sheegay inay gacmo furan ku soo dhaweyn doonaan xiddig kasta oo kula soo biira naadiga reer France.
PSG ayaa diyaar u ah inay wiilka reer Brazil ku khasirto adduun lacageed dhan 222 milyan si ay uga soo kaxeysato Barcelona iyadoo laacibka qudhiisa uu doonayo inuu isaga soo tago camaaliqada Spain kaddib markii uu ka carooday.
Saxiix wayn ayuu u noqon doonaa kooxda reer France kuwaa oo eeganaya inay dib ugu soo laabtaan hogaanka horyaalka Ligue 1 kaddib markii ay Monaco ku guuleysatay sanadii la soo dhaafay.
Laacibkii hore ee Real Madrid iyo Manchester United ee iminka u safta PSG Di Maria ayaa mar wax laga waydiyay sheekada ku jawaabay:
“Shaqaalaha iyo tababare Unai ayay sheekadan u taala, ma ahan wax u yaala ciyaartoyda oo aan anigu ku jiri.
“Laacib kasta oo yimaada kooxda, midkuu doonaba ha ahaadee wuxuu heli doonaa si la mid ah, ugu dambeyna tani waxay ku saabsan tahay PSG.
“Tani waa koox wayn oo eeganeysa inay ku guuleysato koobab, sidaa darteed waxaan heysanaa ciyaartoy badan oo muhiim ah, laakiin ruuxii yimaadaba waxaa lagu soo dhaweyn doonaa gacmo furan.”.
Chelsea oo ku soo laabatay xiisaha Antonio Candreva